चुनावको मुखमा बाँडिदै १० अर्ब ! - New York Samachar
चुनावको मुखमा बाँडिदै १० अर्ब !
काठमाडौं, २९ भदौ । सांसदहरुको पदावधि ३८ दिनमात्रै बाँकी छ । प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको घोषणा भई आचारसंहिता लागू भइसकेको छ । तर यतिबोला सरकारले म्याद सकिन लागेका सांसदहरुमार्फत अर्बौ रुपैयाँको योजना निर्वाचन क्षेत्रमा पठाउने तयारी गरेको छ ।
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले निर्वाचन क्षेत्र विकास र निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम तत्कालै सञ्चालनमा ल्याउने गरी जिल्ला प्राविधिक कार्यालयलाई पत्राचार गरेपछि सरकारको तयारी सार्वजनिक भएको हो । उक्त दुइटै कार्यक्रमको बजेट १० अर्ब २० करोड ५० लाख रुपैयाँ रहेको छ । कान्तिपुरमा समाचार छ ।